Izimpophoma zamanzi zepompi zamanzi China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > IziKhalazo zeCeramic > I-Ceramic Seal Faces > Izimpophoma zamanzi zepompi zamanzi
I-Model No.: JH.CDR.002
Sinikeza ubukhulu bezimpawu ze-ceramic zamanzi ezihlelwe ngokwezifiso ezivela kumklamo ohlukene kuya kumalingani ahlukene. Njengoba sesibumbene amandla okuklama, kulula ukufeza ukwakheka okunamandla kwalezi zimpawu ze-ceramic. I-Aslo, sinomshini wethu wokucindezela we-ISO, ungasisiza ukuba sikhiqize izingxenye ezinkulu ze-ceramic, i-dimater enkulu ye-ceramic seal ingxenye ingaba yi-300mm.
Kungakhiwa ngokudweba kwamakhasimende ngamunye kanye nokwaziswa. I-batch encane kakhulu iyatholakala ukuze inikele ukuhlangabezana nezidingo ze-R & D zamakhasimende.